Dhulgariir Xoog leh ayaa hadda laga duubay Jasiiradda Crete, Greece
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Giriigga » Dhulgariir Xoog leh ayaa hadda laga duubay Jasiiradda Crete, Greece
Jebinta Wararka Yurub • Wararka Giriigga • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Waxaa jira qiyaastii 100 ka mid ah 6.5 dhulgariirrada adduunka sannad kasta. Dhulgariirrada 6.5 waxay awood u leeyihiin inay waxyeello u geystaan. Meelaha dadku ku badan yahay, waxyeelladu waxay noqon kartaa mid daran.
Dhulgariirkii 6.5 ee laga diiwaan geliyey Crete ayaa hoos loogu dhigay 5.9 - taas oo saamayn yar ku leh inta badan kiisaska
5.9 wuxuu ahaa cabbirka EMSC bishii Sebtember 27 (Isniintii 9.17 subaxnimo) dhulgariir ka dhacay Jasiiradda Giriigga ee Crete.
Dadka ku nool gobolka dhow waa in ka badan 480,000
Wali lama hayo xog ku saabsan khasaaraha ama dhaawaca
Crete waa goob weyn oo dalxiis iyo dalxiis u ah Giriigga waana mid ay jecel yihiin Booqdayaasha Yurub ee Jarmalka iyo dalal kale oo badan.
Tweets -ka hore ayaa sheegaya in dhulgariirka loo dareemay mid yar, tweets kale ayaa leh: Waxaan ku arkay Stalis dhulgariir xoog leh, Crete saaka, qolka oo dhan ayaa gariirayay.
Lambarada labaad ayaa hoos looga dhigay 6.0 ilaa 5.8, kuwa kale ayaa la gaarsiiyey 6.2, tweets kale ayaa leh 6.5. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijisay 6.5 oo leh 2km oo qoto dheer oo tixraacaysa EMSC.
Xarunta Seismological Mediterranean -ka Yurub (EMSC) si kastaba ha ahaatee waxay xaqiijisay xoog 5,9 iyo qoto dheer 10 km.